Hoyga > Wararka > Wararka warshadaha > Qalabka loo baahan yahay soo saarista wasakhda caaga ah ee loogu talagalay isticmaalka reerka
PP-ka caadiga ah waxaa badanaa loo isticmaalaa makiinadaha dusha ka laalaada ee la isku duro, kuraasta, saxarada, foostooyinka, berkadaha, qalabka carruurtu ku ciyaarto, xafiisyada xafiisyada, qalabka guryaha, fureyaasha, sanaadiiqda wax lagu beddelo iyo wixii la mid ah. , Dahaarka qaboojiyaha, qolofka qalabka guriga, iwm.
Polypropylene waa cusbo kuleyliye (thermoplastic) ah oo lagu sameeyo polymerization of propylene.Sida ku cad booska methyl qabanqaabada, waxaa loo qaybin karaa seddex nooc: - â is “isotactic polypropylene, â ¡atactic polypropylene iyo â ¢ interisotactic polypropylene.
PP aan sun ahayn, oo aan dhadhan lahayn, ayaa lagu qooyn karaa 100â ƒ ƒ biyo karkaraya bilaa cillad, waxyeello ma leh, aashitada caadiga ah, walxaha dareeraha alkali ee alkali wax saameyn ah kuma leh inta badan waxaa loo isticmaalaa weelasha miiska. sanduuqyada qadada ee dhalaalaya ayaa gaaraya ilaa 167â ƒ „, waa sanduuqa kaliya ee balaastigga ah ee lagu ridi karo foornada microwave, dib ayaa loo isticmaali karaa ka dib nadiifinta taxaddarka leh.
Cufnaanta yar, adkaanta xoogga, adkaanta iyo kuleylka iska caabinta ayaa ka fiican polyetylenka cadaadiska hooseeya, waxaa loo isticmaali karaa qiyaastii 100 darajo.
Waxay leedahay sifooyin koronto oo wanaagsan iyo dahaadhka soo noqnoqda ee sareeya saameyn kuma yeesho qoyaanku, laakiin heerkulkiisu hooseeyo wuu jajaban yahay, ma xirna u adkaysta, waa fududahay inuu gaboobo.
Tikniyoolajiyadda diyaarinta ee PP
PP guud ahaan waxaa loo isticmaalaa isku shaandheynta cirbadaha: Waxyaabaha la isku duro ee PP waxay xisaabtami karaan qiyaastii kala bar, baahiyaha maalinlaha ah ee PP caadiga ah sida alaabta ceeriin, qaybaha gawaarida si loo xoojiyo ama loo adkeeyo PP sida walxo cayriin ah, adeegsiyo kale oo leh saameyn saameyn sare leh iyo heerkulka hooseeya ee PP- C ceyriin.
Qodobbada Feejignaanta Isticmaalka
Qaar ka mid ah sanduuqa microwave, sanduuqa jirka ilaa 5 wax soo saarka PP, laakiin daboolka sanduuqa waxaa laga sameeyaa 1 PE, maxaa yeelay PE ma adkeysan karto heerkulka sare, laguma dhex ridi karo foornada microwave ee leh sanduuqa jirka.
PVC waa polymer oo ka mid ah polymerization xagjir ah oo bilaash ah ee monomer polyetylen. Waa mid ka mid ah noocyada kala duwan ee cusbada. Waa noocyada ugu badan ee laamiga ka hor 1960s, waana kan labaad ee dhammaadka 1960-yadii.
Marka loo eego miisaanka molecular, PVC waxaa loo qaybin karaa nooc guud (heerka celceliska polymerization waa 500-1500) iyo polymerization heer sare ah (heerka celceliska polymerization wuxuu ka weyn yahay 1700) laba nooc. nooca.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee PVC:
1) waxqabadka guud: Dheecaanka PVC waa budo cad ama khafiif ah, adkeysiga badeecadaheeda waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo lagu darayo tirada bacrimiyeyaasha, oo ka sameysan alaab jilicsan oo adag. Nadiifinta iyo nadiifinta biyaha PVC oo aad u yar.
2) Qalabka Farsamada: PVC waxay leedahay adkeyn sare iyo astaamo farsamo, waxayna ku kordheysaa kororka culeyska molikiyuulka, laakiin waxay ku sii yaraaneysaa kororka heerkulka. Tirada caagayaasha lagu daro PVC waxay saameyn weyn ku leedahay aaladaha farsamada. Guud ahaan, aaladaha farsamada ayaa hoos u dhaca marka la kordhiyo waxyaabaha ka kooban bacriminta. Iska caabbinta PVC-ga ayaa guud ahaan ah.
1) codsiga alaabada adag ee PVC
Waxyaabaha tuuboyinka:loo adeegsaday tuubada biyaha sare, tuubada biyaha hoose, tuubada gaaska, tuubada faleebada iyo astaamaha biibiile dunta: waxaa loo istcimaalaa albaabada, Windows, looxyada qurxinta, khadadka alwaaxa, alaabta guriga iyo kuraasta gacmaha.
Saxan:waxaa loo qaybin karaa loox jiingado ah, guddi cufan iyo guddi xumbo leh, oo loo adeegsado xajinta, saqafka, xiraha, sagxadda iyo wixii la mid ah Xaashida: waxaa loo isticmaalaa alaabada caagga ah, sida sanduuqyada baakadaha kala duwan. , xarig iyo wixii la mid ah.
Qaybta dhalada:cuntada, daawada iyo waxyaabaha lagu qurxiyo alaabada la isku qurxiyo.
Waxyaabaha duritaanka:Qalabka tuubbada, fureyaasha, qalabka xafiisyada guryaha iyo guryaha korontada, iwm.
2) adeegsiga alaabada jilicsan ee PVC
Filim:filimka lagu koriyo beeraha, filimka baakadaha, filimka roobka, iwm.
Fiilooyinka:Waxaa loo isticmaalaa sanduuqa dahaadhka danab dhexdhexaadka ah iyo kan hoose ee shey shey leh. Dharka: cagaha iyo dhammaadka
Maqaar:maqaar macmal ah, maqaarka sagxadda iyo gidaarka gidaarka, iwm Kuwa kale: tuubooyin hufan oo jilicsan, diiwaanno iyo goomayaal, iwm.
Hore:Hordhaca alaabada PC-ga ee balaastigga ah
Xiga:Mabda 'noocee ah ayaa wax taaj oo kale lagu durayaa oo ku shaqeynaya caaryada caaga ah?